‘जन्मदिनमा जन्म दिने मान्छे चैं स्पेसल गेस्ट हुन सक्दैन हो बाबा?’
नागरिक ९ माघ २०७८ आइतबार १ मिनेट पाठ
एकजना आधिकारिक मान्छे आए। अलि आक्रोशित स्वरमा भने, ‘हामीले निम्तो गर्दा उहाँ हाम्रा पक्षको मान्छे हुनुहुन्थ्यो तर अहिले विपक्षीको पो हुनुभएछ त, हामी के गरौं?’
यस्ता नहुने काम बोकेर हिंड्छौ! उतै मिलाउनु! सचिवले फाइल निष्ठुरी तालमा पर फाली आफ्नो कार्यकक्षमा गए। मिल्किएको फाइल बडो जतनसित उठाई बूढा बाहिर निस्के।
के अझै ऊ आउँछे?
देख्नेहरू अड्कल काट्थे, ‘यिनीहरू दुई जोइपोई नभएर भर्खर प्रेममा रमाउँदै गरेका जोडी हुन्। छन् पनि विहे भएर सन्तान हुन्जेलसम्म उस्तै नयाँ, ताजा र रोमान्टिक प्रेम। यस्तो कसको हुन सक्ला?
जीवनमा व्यापार कि व्यापारमा जीवन?
जीवन जिउने कला अवश्य चाहिन्छ। सुख, दुःख, अनुकूल, प्रतिकूल सबैको समता अर्थात् सन्तुलन कायम गर्न जान्ने कला विकास नहुँदासम्म इमानदारीको जीवन बाँच्न सकिन्न। आफू सफल बन्नुको तात्पर्य अरूलाई पछि पार्नु र शोषण गर्नु पनि होइन। स्वभाव, चरित्र र सोचले वर्तमानलाई कसरी प्रेरित गरेको छ र के सिकाइ दिएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ।
डा. नम्रता पाण्डे ८ माघ २०७८ शनिबार ५ मिनेट पाठ
ऋषिमाया बज्यैले रिसाउँदै भनिन्, ‘छोराबुहारीलाई संस्कारी बनाउने नबनाउने आफूमा पो भर पर्छ त दिदी। हजुरको बोली नै त्यस्तै छ। कस्ता होऊन् त?’
बुढालाई तुरुन्त भिडियो कल गरिन्, ‘बुढा, दिनभर घर बस्दा छटपटी लाग्छ। कहिले आउने टुंगो छैन। यो साडी लगाएर देखाउँछु ल?’
मेरो गर्लफ्रेन्डसँग विवाह गर्ने तँ को होस्
विवाह हुँदै गर्दा एकजना केटा आए र एक्कासि दुलाहालाई थप्पड ल्याउँदै भने,‘हामी सँगै पढेका साथी हौं। मेरो गर्लफ्रेन्डसँग विवाह गर्ने तँ को होस्।’
बुद्धले दिएको उपदेश र बुद्धप्रतिको भ्रम
बुद्धको ज्ञान धर्म होइन, कुनै सम्प्रदाय पनि होइन तर हामीले सम्प्रदाय बनायौं र धर्मको नाममा नानाथरीका नीति नियम बनाएर उल्टै भ्रम फैलाउने काम मात्र गरिरहेका छौं।
प्रेममान डंगोल ८ माघ २०७८ शनिबार ६ मिनेट पाठ
सहज प्रवाहका सरल कथा
‘न्यूरोडका झाँकी’ संग्रहभित्रमा दिनहुँ हामीले देखेका, चिनेका, बोलेका र देखेर पनि नचिनेका पात्र छन्, तिनै पात्रहरूका कथा र व्यथा छन्।
रत्न प्रजापति ८ माघ २०७८ शनिबार ३ मिनेट पाठ
थुप्रै भो बलिदानी नतीजामा केही जुका मोटाए,भोकै छन् भुई मान्छे अझै न आङ छोप्न वस्त्र पाए। थुप्रै तन्त्र फेरियो, उही छ शासन र त वाक्क भएर,तन्त्र व्यापारीविरुद्ध श्रीमान् यी जन मुद्दा लड्न आए।